Umzi mveliso waseTshayina weMesh Filter kunye nabathengisi | Dongjie
I-1.Filter mesh ikwabizwa ngokuba ziindawo zokugcina isitampu, ezona zixhobo ziphambili zise mesh yokuhlutha zibandakanya intsimbi engenasiseko 201,304,316,316L.Umphezulu ungapeyintwa ubhedu okanye umbala wobhedu.Usetyenziselwa kakhulu ukucoca amanzi, ukutya kunye nolwelo olunamayeza.Umyalezo wokucoca ulwelo ineengenelo ezinje ngefom efanelekileyo yokuphazanyiswa, ukumelana kakuhle nobushushu, ukumelana nobushushu, uxinzelelo kuxinzelelo, anti-rust. Sinokwenza nokwenza ngokwezifiso ngokweemfuno zomthengi kunye nesicelo.
Zimbini iindlela zenkqubo yokuvelisa: enye yeefilitha yentsimbi engaginyiswangayo, icinezelwe, umphetho ngeplani yentsimbi okanye ngenaliti yokufakwa engxingweni, enye yenye yentsimbi ye-wedge yentsimbi ejijwe ngocingo.Imilo eyahlukeneyo yemeyile yokucoca , Itekhnoloji nayo yahlukile.
3.Imilo ye-mesh yeefilitha zijikelezile, zixande, i-oval, iflat ezantsi, njalo njalo. Inani lemihla libandakanya umaleko omnye, iiplanga ezimbini, kunye neendidi ezininzi, abathengi baya kukhetha ungqameko olunye okanye umaleko ngokwendlela yokusebenza kwabo.
Isikrini sokucoca singasusa ngokuphumelelayo ukungcola okubonakalayo kuqokelelo nenkqubo yokucoca, ukukhusela izixhobo zombhobho, kunye nokuphucula ukusebenza kwendlela yokucoca. Ifanelekile kwiifilitha ezahlukeneyo zeoyile, ifilitha engamanzi, kunye nezixhobo zokucoca amanzi.
I-mesh yokucoca isetyenziswa kumatshini wokungenisa umoya komoya, inokugcina ucoceko loomatshini kwaye ithintele ii-sundries zingene kwi-cavity.Filter ngokusebenzisa isikrini, ukwenzela ukuphepha ukubhengeza, ukwenzela ukwandisa ubomi benkonzo yomatshini.
I-mesh ye-Filter ilungele ukufakwa kwamanzi, ukumanziswa, ukufuduswa kunye nokufayilishwa kwiipetroliyam, ukucoca ioyile, ikhemikhali, ishishini lokukhanya, amayeza, isinyithi, oomatshini kunye namanye amashishini.
Edlulileyo: Somlomo Mesh
Okulandelayo: Intsimbi yeMesh
Isihluzi seCarbon esebenzayo